Android Phone မှာ Malware မကူးစက်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ? – DigitalTimes
Android Phone မှာ Malware မကူးစက်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ?
Android FEATURES HUBS Mobile & Tablets Softwares & Application
ဒီနေရာမှာ Android တွေလို့ပဲသုံးလိုက်ရတာက Android က Apple ထက်ကို Malware ဝင်နိုင်ချေပိုများတဲ့ Open Platform တစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။ လက်ရှိမှာတော့ Malware တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ Google ကနေ Google Play Protect ကိုဖန်တီးနေဆဲဖြစ်ပေမယ့် ထွက်မလာသေးပါဘူး။ Google ထိန်းချုပ်ပေးတာမပေးတာအပြင် နောက်ထပ် ကိုယ့်ဖုန်းကို လုံခြုံအောင် Malware တွေကင်းအောင် အလွယ်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
ဒါဆို Android Malware ဆိုတာဘာလဲ??
Malware ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရင်ကကြားဖူးမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ သူကတော့ “Malicious Software” ရဲ့အတိုကောက်ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး Windows တွေမှာတွေ့ရလေ့ရှိရုံတင်မကဘဲ Android တွေမှာပါ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သူကတော့ Popup ကြော်ငြာတွေပေါ်လာတာ Toolbars တွေ Install လုပ်သွားတာ စတာတွေကိုလုပ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
Android မှာ ပုန်းကွယ်နေတတ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဖြစ်လို့ လူတော်တော်များများက ဒီလို Malware အရှုပ်ထုပ်တွေ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ Install လုပ်နေတာကို မသိတတ်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့တရားဝင် App တစ်ခုခုအဖြစ်ပြရင်ပြနေမယ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်မမြင်ရတဲ့နေရာမှာပျောက်နေတာမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်ကနေ တစ်ချိန်လုံး Run နေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုခိုးယူ တစ်နေရာဆီပို့ပေး ဒါမျိုးတွေလုပ်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီ Malware တွေကို Android မှာအလွယ်တကူရှောင်ရှားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။
Official Apps တွေကိုပဲသုံးပါ။
တခြား မိုဘိုင်းလ် Operating System တွေနဲ့ Android နဲ့မတူတဲ့တစ်ချက်က အပြင်တရားမဝင် App တွေရနိုင်ခြင်းပါ။ Sideload App တွေလို့ခေါ်ပြီး Google ရဲ့ တရားဝင် Play Store မှာ မရှိတဲ့ App တွေပါ။ App က ကိုယ့်နိုင်ငံမှာမရတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် နောက်ဆုံးဗားရှင်းမထွက်သေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အများစုက အပြင် Site တွေကဒေါင်းကြတဲ့အခါမျိုးမှာ ပါလာတာပါ။
ဒီလိုအပြင် Site တွေက App တွေကိုသွင်းတာက အန္တရာယ်များတဲ့အတွက် Google က Play Store မှာတွေ့ရတဲ့ Malicious App တွေတော်တော်များများကို လျှော့ချဖို့လုပ်နေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမှ Manually Install သွားလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Malware ကို Install သွားလုပ်နေသလိုဖြစ်လို့ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Google အနေနဲ့ Sideload တွေကို Disable လုပ်ဖို့ Default ထားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ Sideload App တွေကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမယ့်ဝဘ်ဆိုဒ်က ယုံကြည်ရရဲ့လားဆိုတာ တစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ Apk Mirror တို့က App တွေဆို စိတ်ချရပြီး ဝဘ်ဆိုဒ်မှာတင်ခွင့်မပြုခင်ကကို အတည်ပြုစစ်ဆေးပြီးသားတွေပါ။ မသိတဲ့ဆိုဒ်ကနေ Apk တွေကိုဒေါင်းလုပ်ချမယ်ဆိုရင်တော့ Developer ရဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်လား Developer ကနာမည်ကြီးလား စိတ်ချရရဲ့လား စတာတွေကိုတော့ စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကြော်ငြာတွေပါ။ ဝဘ်ဆိုဒ်မှာကြော်ငြာတွေဘယ်လောက်များသလဲ၊ ဗရုတ်သုတ်ခကြော်ငြာတွေလား အဲ့လိုကြော်ငြာတွေများနေတဲ့ဆိုဒ်ဆိုရင်တော့ ဝေးဝေးရှောင်တာကောင်းပါတယ်။
Third-Party App Stores တွေကို ရှောင်ပါ။
Google Play မဟုတ်ဘဲ တခြား Application Download လုပ်တဲ့ App Store တွေကိုမသုံးပါနဲ့။ Google Play ကမပြီးပြည့်စုံသေးဘူးဆိုပေမယ့်လည်း Junk File တွေများတဲ့တခြား Third-Party Site တွေထက်တော့စိတ်ချရပါသေးတယ်။ Sideload App တွေရဲ့နောက်ထပ်ဆိုးတဲ့တစ်ချက်က App တစ်ခုသွင်းချင်ရင် သူ့အရင် တခြား App တွေကိုသွင်းမှဆိုတာမျိုးတွေရှိပါသေးတယ်။
App Store ကိုယ်တိုင်ကမှ Malicious ဖြစ်နေရင် သူ့မှာ App တွေကို Install လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးပိုရှိသွားပြီး Malware တွေကိုသွင်းနေတော့မှာပါ။ ဒီလိုနဲ့ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ Malware ပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
Google Play ကိုသုံးရင်တောင် Official Apps တွေကိုပဲသွင်းပါ။
အပေါ်ကပြောထားသလို Google Play လည်းပြည့်စုံလွန်းလှတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ Play Store မှာတောင် App အတုတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီပြဿနာကိုလျှော့ချဖို့ Google ကလည်း ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပြီး Ap တစ်ခုကိုသွင်းတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ Permissions တွေကိုစစ်၊ Description တွေကိုဖတ်ပြီး Developer Account ကိုစစ်ကြည့်မှရပါမယ်။
System ကိုအမွဲ Update လုပျပါ။
လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးလို့ပဲ Google ကနေ Security Patch တွေလတိုင်းထွက်ပေးနေတာပါ။ System ကိုဝင်လာမယ့်အဖျက်အစီးတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ စနစ်မှာယိုပေါက်တစ်ခုခုရှိလာပြီဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် Malware တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံထားရပါပြီ။
Features အသစ်အသစ်တွေပဲယူလာမှာတော့မဟုတ်ပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှုက Security Update တိုင်းမှာပါပါတယ်။
Blu-ray စက်တွေ ဆက်ထုတ်တော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း Samsung ကြေညာ